कोरोनाविरुद्ध कुन देशमा कस्तो नियम ? लाखौँ जरिवानादेखि जेलसम्म | Kendrabindu Nepal Online News
32448944 988272 7510230 23950442
कोरोनाविरुद्ध कुन देशमा कस्तो नियम ? लाखौँ जरिवानादेखि जेलसम्म
६ चैत्र २०७६, बिहीबार १७:०६
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले विश्वभर आतंक मच्चाइरहेको छ । विश्वका १७३ वटा देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ८ हजार भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । यसबाट संक्रमितको संख्या २ लाख १८ हजार नाघेको छ ।
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएपछि यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशहरूले आ-आफ्नै तयारी थालेका छन् । कतिपय देशहरूले त कडा नियम बनाई लागू गरेका छन् ।
उत्तर कोरीयामा यस अघि नै एक जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई मारिएको दक्षिण कोरीयाका संचारमाध्यमले जनाएको थियो । यता दक्षिणपूर्वी केन्यामा एकजनालाई कोरोनाभाइरस भएको शङ्कामा पिटेर मारिएको बताइएको छ । केही युवा समूहले पिटेकोले उक्त व्यक्तिको अस्पतालमा मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
कुन कुन देशमा के कस्तो नियम ?
इटालीमा ३ महिना जेल र १६ हजार जरिवाना
कोरोना भाइरसबाट चीनपछि प्रभावित भएको दोस्रो देश भनेको इटाली हो । इटालीको उत्तरी इलाकामा शुरूमा यातायात प्रतिवन्ध गरेको छ । अहिले पुरै देशमा लकडाउन गरिएको छ । सरकारले ६ करोड जनतालाई घरमै बस्ने सल्लाह दिएको छ । जनतालाई आपत अथवा अतिआवश्यक काम परेमा मात्र बाहिर निस्कन भनेको छ । जुन व्यक्तिले यस नियमको उल्लघंन गरिएको पाइएमा करिव १६ हजारसम्मको जरिवाना हुनसक्ने साथै ३ महिनाको लागि जेलसमेत हुन सक्ने दण्ड लागू गरेको छ ।
स्पेनमा सेनाको मद्दत
स्पेनमा पनि सार्वजनिक स्थलहरु सबै ठप्प भएका छन् । त्यहाँ सरकारले सर्वसाधारणलाई बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । स्पेनको प्रधानमन्त्रीले पब्लिक इमेरजेन्सीको घोषणा गरेका छन् । सार्वजनिक समारोह प्रतिवन्धित साथै समारोह नगर्न सुनिश्चित गर्नका लागि स्पेनले सेनाको मद्दत लिएका छन् । स्थानीयको अटेरपछि त्यहाँको सरकारले सेनाको सहयोग लिनु परेको जनाएको छ ।
साउदी अरबमा ९८ लाख जरिवाना
साउदी अरबले पनि आफ्नो देशमा प्रवेश गर्नेहरूको स्वास्थ्य परिक्षण साथै यात्रासँग जोडिएको जानकारी नदिएमा ९८ लाख रुपैया जरिवाना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अष्ट्रेलियामा ३७ लाख जरीवाना र जेल
त्यस्तै अष्ट्रेलिया आइसोलेसनलाई लिएर नियम तयार गरेको छ । आइसोलेसन नियमको पालना नगर्नेलाई भारी जरीवाना बुझाउनु पर्ने साथै केही ठाउँहरुमा जेल सजायको समेत प्रावधान गरेको छ । उत्तर अष्ट्रेलियामा यदि यो नियम पालना नगरेमा ३७ लाख रुपैयाँ समेतको नगद जरिवानाको नियम बनाएको छ ।
त्यस्तै न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेन्सिडा अर्डनले पनि आइसोलेसनको पालना नगर्नेलाई जरिवानाका साथै दण्डको चेतावनी दिएकी छिन् । अमेरिकामा सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनको आधिकारीक यस भाइरसको प्रचार रोक्नका लागि जरुरी कदम उठाएको छ ।
Australia, China, corona, iran, Itali, usa
Prevशेयर बजार बन्द गर्न छलफल
‘सेलपे’ को २०२० एस २० योजना सुरुNext
कांग्रेस सभापति देउवा कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा
सीमा विवाद चर्किदै गर्दा भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुने
प्रचण्डनिवासमा खटिएका ६ प्रहरीमा कोरोना पोजिटिभ
दुई महाशक्ति राष्ट्रबीचको कूटनीतिक टकराव
छिमेकी मुलुकहरुसँगको सीमा विवाद मोदीको अग्निपरीक्षा
नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै चीन दबाबमा, फेरि त्रिपक्षीय समझदारीको कुरा
सप्तरीका कोरोना सङ्क्रमित एक पुरुषको धरानमा मृत्यु
भारतका चर्चित गायक एसपी बालासुब्रमण्यमको निधन
मन्टेश्वरीदेखि मास्टर्ससम्म आधुनिक र संस्कारयुक्त शिक्षा : टेक्सस इन्टरनेशनल कलेज (भिडियो)
लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो–सभामुख सापकोटा (अन्तर्वार्ता)
घुम्नै पर्ने रमणिय कैलालीको घोडाघोडी ताल
निरन्तर अब्बल शैक्षिक परिणाम हासिल गर्न सफल : जेभियर इन्टरनेसनल कलेज (भिडियो)
डिजिटल, फिजिकल र रिजल्टमा सधैं अब्बल : किष्ट कलेज (भिडियो)
मदन पुरस्कारको गरिमा थाम्न सकिन्न कि भन्ने डर छ– चन्द्रप्रकाश बानियाँ
आर्थिक प्राथमिकताहरुको पुनर्विन्यास तथा स्रोत साधनको पुनःनिर्धारणमा विलम्ब नगराैँ: प्रधानमन्त्री
पैसा थुप्रिएपछि लगानीका विकल्प खोज्दै बैंकहरू